Warshad batari Lithium Polymer, shirkado cusub - Soosaarayaasha batari lithium polymer
Batroolka Li-po 605264 2300mAh 3.7V Qolka baytariga ee loogu talagalay af-hayeenka Bluetooth, Ciyaaraha, Robotka Elektarooniga ah, POS
Dembeelka la soo celin karo ee PLM-605264 3.7V 2300mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu wanaagsan ee leh awooda sare ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Li-po Battery A7 2100mAh 3.7V Battery Cell oo loogu talagalay Afhayeenka Bluetooth, Alaabada, Robotka Elektarooniga ah, Maska Smart
Bateriga dib loo soo celin karo ee loo yaqaan 'PLM-A7 3.7V 2100mAh' ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awood sare oo macquul ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Batroolka Li-po batari NP-FZ100 7.2V 2280mAh Qolka baytariga ee loogu talagalay POS, Camera
Bateriga dib loo soo celin karo ee PLM-NP-FZ100 7.2V 2280mAh ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awooda ugu sareysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Batari Li-ion ah oo la qaadi karo 2500mAh gacanta gacanta lagu qaadan karo oo kiniin ah NFC POS Mobile Payment Terminal Terminal POS
Bateriga dib loo soo celin karo ee PLM-XK-6019 3.7V 2500mAh ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awooda ugu sareysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
335074 3.7v 1550mah dib loo isticmaali karo baytariga Li-po ee heerkulbeegga
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-335074 3.7V 1550mah batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sareysa ee suurta galka macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Danab sare 7.4V 1800mAh LP-E6 batari li-po ah oo dib loo soo celin karo oo loogu talagalay duubista fulinta booliska
Dib loo soo celin karo batteriga PLM-LP-E6 7.4V 1800mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sareysa ee ay suurtagal ku tahay macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Laba Way SC2F 7.4v 2000mAh Polymer Lithium Batriiki Xirmada Batteriga Kaydinta ee Qalabka Micro Talk Radio Pack, Toys, Robot elektiroonig ah, Qalabka Fulinta Sharciga
Bateriga dib loo soo celin karo ee PLM-SC2F 7.4V 2000mAh ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awooda ugu sareysa ee suurtogalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Awood sare 3.8V 1700mAh 803048-2P batari li-po ah oo dib loo soo celin karo oo loogu talagalay rikoorka fulinta booliska
Bateriga dib loo soo celin karo ee PLM-803048-2P 3.8V 1700mah ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awooda ugu sareysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Li-po Battery NP-BX1 3.7V 1400mAh Battery Unugyada loogu talagalay POS, Camera
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-NP-BX1 3.7V 1400mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sarreysa ee suurtagalka ah ee macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Batroolka Li-ion ee laga saari karo 1600mAh gacanta lagu qaadan karo ee NFC kiniiniga PDA PDD 2D barcode scanner oo leh tikidka baska POS.
Bateriga dib loo soo celin karo ee PLM-T8601 3.7V 1600mAh ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awooda ugu sareysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Batroolka Li-po V9 1800mAh 3.7V baytariga Taleefanka ee ku hadla Afka Bluetooth, Qalabka Ciyaaraha, Robotka Elektarooniga ah, Qalabka Dhaqangelinta Sharciga
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-V9 3.7V 1800mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sareysa ee ay suurtagal ku tahay macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.